MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: KIA, တပ်ရင်း (၆, ၉, ၂၆)ဒေသတို့ တွင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်၊ မြန်မာတပ် မှ အရပ်သားများ အားအကြောင်းမဲ့ ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်နေ
KIA, တပ်ရင်း (၆, ၉, ၂၆)ဒေသတို့ တွင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်၊ မြန်မာတပ် မှ အရပ်သားများ အားအကြောင်းမဲ့ ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်နေ
(3.2.2015) ရက်နေ့ နံနက် (၈) နာရီ အချိန်တွင် ဖါးကန့် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၆) ဒေသ တွင် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၆) နှင့် မြန်မာ စစ်တပ် တပ်မ(၆၆) သို့ ဖိုးဝီး ကား (၃)စီး ဖြင့် စစ်ကူ လာ သော မြန်မာ စစ်တပ် တို့ တိုက်ပွဲ ဖြစ် ပွားကြောင်း ကေ အိုင်အေ ရှေ့တန်းအရာရှိများထံ မှ သတင်းရရှိပါသည် ။
၃.၂.၂၀၁၅ ရက်နေ့ ညနေ (၅)နာရီ အချိန် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၉) ဒေသ ထိုးစစ်ဆင်ရန် စစ်ကူ အဖြစ် လားရှိုး ဘက် မှ စစ်ကား ကြီး (၅)စီး ဖြင့် တက် လာစဉ် ကွတ်ခိုင်တောင်သုံးဆယ် (လွယ်ဆမ်ဆစ်) နှင့် မာန်ပိန်း အကြားတွင် တိုက် ခိုက်ခံရ ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ထို့ အပြင် ၃.၂.၂၀၁၅ ရက်နေ့ နံနက် (၈)နာရီ အချိန် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၉) ဒေသ ထိုးစစ်ဆင်ရောက်ရှိ လာသော မြန်မာ စစ်တပ် (ခမရ-၅၆၈) တပ်နှင့် ကေအိုင်အေ တပ် ရင်း(၉) တို့ ဟို ဖြတ် အနီးတွင် တိုက်ပွဲ ဖြစ် ပွား ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
(၃.၂.၂၀၁၅) ရက်နေ့ နံနက် (၈) နာရီ အချိန် ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၂) လက်အောက်ခံ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၂၆) ဒေသ ဖြစ်သော ဟိုပင်ဒေသခံ မောင် လဖိုင်မာဒီး (၂၈) နှစ် သည် ဖားကန့် မှ ဆင်း လာစဉ် မြန်မာ စစ်တပ် (ခလရ-၆) တပ် မှ
လုံတောင်ဂိတ် အရောက်တွင် အကြောင် မဲ့ ဖမ်းဆီး ရိုတ်နှက် ခြင်း ကြောင့် အပြင်း အထန် ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၄င်း အား ယခု အခါ ဟိုပင်ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသခံနေရကြောင်း ဒေသခံ များထံ မှ သတင်းရရှိပါသည်။
Dung (6) Ni Myen Modo Kapaw Ayai Kau. Myen Hkala Lam Law, Du (1) Si
KIA Masat (6) Dap Dung, Nam Ya Lahta Kaw KIA Ni Myen Dap Modo Hkap Kapaw, Myen Hkala Lam Law, Du (1) Si
Feb 3, 2015 ya shani 8:00am ten daram hta KIA Masat (2) Dap Ba, Mat (6) Dap Dung ginra Hpakant Nam Ya mare de na 4×4 “4WD” Modo (3) hte Tat.M-(66) ni hpe ngun jat na matu lung wa ai mying nchye shi ai Myen tai hpyen hpung ni hpe Nam Ya hte Kap Maw lapran na lup wa kawng kaw tinang KIA MHH ni Bawm hte hkap adem bun ai hta myen dap maga na malawng maga hkala nba hkrum mat nna, Myen Du (1) si mat ai lam na chye lu ai, dai myen du waamang hpe dai shana de jang Kamaing de htaw mat wa sai lam shiga na chye lu ai.
Dung (9) Ni Myen Modo Hkap Kapaw Myen (15) Si
KIA Dap Dung (9) Ginra Man Pying Makau Kaw KIA Dap Ni Myen Dap Modo Hkap Kapaw, Myen (15) Si, Marai (7) Hkala
Feb 3, 2015 ya shani 5:30pm ten daram hta lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba, Masat (9) Dap Dung ginra Lashio de na mying nchye shi ai Myen tai hpyen hpung ni Modo (5) the lung wa ai hpe Bum Sum Shi the Man Pying lapran na hpun gaw kadawng kaw tinang KIA MKM ni Mawm hkap dem bun ai hta myen dap maga na marai (15) si nna marai (7) hkala hkrum mat ai lam shiga na chye lu ai.
KIA Dap Dung (9) Hu Hpyet Hka San Yang Kaw Gasat Poi Byin
Feb 3, 2015 ya shani 8:00am ten daram hta lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba, Masat (9) Dap Dung ginra hta Myen dap Hk.M.Y-(568) dap na myen tai hpyen hpung ni hte tinang KIA dap Gyi Jum U-se Awng woi awn ai hpyen hpung ni Hu Hpyet Kadung Hka San Yang kaw laja lana gasat poi byin ai lam shiga na chye lu ai.
Hu Pin Mare Na Jinghpaw Mung Masha Langai Hpe Myen Dap Hk.L.Y-(6) Ni Rim Adup Zingri
Feb 3, 2015 ya shani 8:00am ten daram hta KIA Masat (2) Dap Ba, Masat (26) Dap Dung ginra Hupin Mya Ti Ta kaw shanu nga ai Slg. Lahpai Zau Tang the Jan. Labya Hkawn Nu yanakasha Lahpai Ma Di Asak (28) ning gaw Hpakant kaw na yu wa ai lam lapran Lung Tung Gate kaw Myen gwi dap Hk.L.Y-(6) ni rim la nna zingri kau ya ai lam shiga na chye lu ai. Ya yang Hu Pin Mung shawa tsi rung kaw tsi tsi hkam la nga ai lam shiga na chye lu ai.